Ihowuliseyili i-SARS-CoV-2 engathathi cala kubavelisi bovavanyo olukhawulezayo lwe-Antibody kunye nomthengisi | Immuno
Isetyenziselwe I-SARS-CoV-2 engathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody
Uvavanyo olukhawulezileyo lokuchongwa komgangatho wee-antibodies ezithomalalisayo kwi-SARS-CoV-2 okanye izitofu zayo kwigazi elipheleleyo, kwi-serum, okanye kwi-plasma.
1. CE Kuvunyiwe
2. Uluhlu olumhlophe lwase China oluvunyiweyo umenzi wee kits zovavanyo lwe-COVID 19 kunye ne-SARS-CoV-2 engathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (COVID-19 Ab)
A. Ukuvavanywa kwegazi, ukulingwa ngomnwe kwegazi liphela kuyasebenza.
B. I-cutoff yi-50ng / mL
C. Kulula ukusebenza, akukho zixhobo zongezelelweyo zifunekayo ukuqhuba uvavanyo
D. Umzekelo omncinci uyafuneka. I-10ul yeserum, iplasma okanye i-20ul yegazi elipheleleyo zanele.
Vumela isixhobo sovavanyo, isampulu, i-buffer, kunye / okanye ulawulo lokulinganisa kubushushu begumbi (15-30 ° C) ngaphambi kovavanyo.
1) Yizisa isingxobo kubushushu begumbi ngaphambi kokuvula. Susa isixhobo sovavanyo kwisingxobo esitywiniweyo kwaye usisebenzise ngokukhawuleza.
2) Beka isixhobo sovavanyo kwindawo ecocekileyo ethe tyaba.
Bamba i-dropper ngokuthe nkqo, zoba isampuli ukuya kwiLayini yokugcwalisa (malunga ne-10 μL), kwaye udlulisele isampuli kwisampulu (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko yongeza amathontsi ama-3 esixhobo (malunga ne-120 ml) kwaye uqalise isibali-xesha . Jonga umzekeliso ongezantsi. Kuphephe ukurhola amaqamza omoya kwimodeli elungileyo (S).
Ukusebenzisa i-dropper: Bamba i-dropper ngokuthe nkqo, zoba isampulu ye-0.5-1 cm ngaphezulu kwe-Fill Line, kwaye ugqithise amathontsi ama-2 egazi elipheleleyo (malunga ne-20 µL) kwi-specimen well (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko dibanisa amathontsi ama-2 Isikhuseli (malunga nama-90 uL) kwaye uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
Sebenzisa imicropipette: Umbhobho kunye nokuhambisa ama-20 µL egazi elipheleleyo kwisampuli (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko dibanisa amathontsi amathathu esikhuseli (malunga ne-120 µL) kwaye uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
3) Lindela imigca enemibala ukuba ivele. Funda iziphumo kwimizuzu eli-10. Musa ukutolika iziphumo emva kwemizuzu eli-15.
- Efanelekileyo (+)Kuvela kuphela umgca we-C, okanye umgca we-T ulingana nomgca we-C okanye ubuthathaka kunomgca we-C. Ibonisa ukuba kukho ii-antibodies ze-SARS-CoV-2 ezithomalalisayo kwisampuli.
- Ukungalunganga (-)Zombini ii-T line kunye no-C ziyavela, xa ubukhulu bomgca we-T bomelele kunomgca we-C. Ibonisa ukuba akukho zintsholongwane zithintela i-SARS-CoV-2 kwi-specimen, okanye kungenjalo i-titer ye-SARS-CoV-2 antibodies yokuthomalalisa ikwinqanaba eliphantsi kakhulu.
- AyisebenziUmgca wolawulo uyasilela ukuvela. Umthamo weesampulu ongonelanga okanye ubuchwephesha bendlela ezingalunganga zezona zininzi
Egqithileyo I-COVID-19 engathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody
Okulandelayo: I-COVID-19 yovavanyo lweAntigen Sheet Sheet Sheet
Uvavanyo lwe-antigen kunye ne-antibody
Uvavanyo lwe-antibody lwe-COVID-19
Uvavanyo lwe-igm antibody
ityhefu yomzimba yokuvavanya ngokukhawuleza